February 4, 2020 - Myitter
၀ူဟန် အသေမြန်ရောဂါ ဆေးကုသပေးနေသည့် ဆရာဝန်ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံး ….
February 4, 2020 Myitter 0
၀ူဟန် အသေမြန်ရောဂါ ဆေးကုသပေးနေသည့် ဆရာဝန်ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံး February 4, 2020 တရုတ်နိုင်ငံ ဟူနန်ပြည်နယ်က ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်Song Yingjie ဆောင်ယင်ကြည် အသက်( ၂၈) နှစ်ဟာ Hengyang ဆေးရုံမှာ အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့ဒဏ်ကြောင့် ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ပါတီပြန်ကြားရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ […]
တရုတ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး သံသယ ရှိသူ အဖေ နဲ့ ခွဲထားခံရတဲ့ မသန်စွမ်း ကလေးတစ်ဦး အစာငတ်သေဆုံး
တရုတျမှာ ဗိုငျးရပျဈပိုးသံသယရှိသူအဖနေဲ့ ခှဲထားခံရတဲ့ မသနျစှမျးတဈဦး အစာငတျသဆေုံး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသဈဖွဈပှားရာ တရုတျနိုငျငံအလယျပိုငျး ဟူပေးပွညျနယျမှာ ဆယျကြျောသကျအရှယျ မသနျစှမျးတဈဦး အစာငတျပွီး သဆေုံးခဲ့ပါတယျ…. သူဟာ မသနျစှမျးဖွဈနတေဲ့ အသကျ(၁၆)နှဈအရှယျ Yan Cheng ဖွဈပွီး၊ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျနတေယျလို့သံသယရှိတဲ့ ဖခငျနဲ့ အကိုတို့နဲ့ သီးသနျ့ခှဲထားခံရတာပါ။ တဈပတျကွာ မိသားစုနဲ့ခှဲထားခဲ့လို့ ဇနျနဝါရီလ(၂၉)ရကျနကေ့ […]
မန်တလေး မွို့တျောဝနျ ဒေါကျတာ ရဲလှငျ ၏ စိတျဓာတျ ကတော့ တကယျ့ လေးစားဦးညှတျစရာပါဗြာ
မန်တလေးမွို့တျောဝနျ ဒေါကျတာရဲလှငျ၏ စိတျဓာတျကတော့ တကယျ့လေးစားဦးညှတျစရာပါဗြာ ဝူဟမျပွနျကြောငျးသားကြောငျးသူတှရေဲ့ ဆေးမှတျတမျးမှာ ရှိတဲ့ မှေးနကေို့ကွညျ့ပွီး ကရြောကျလာတဲ့ မှေးနပေို့ငျရှငျကို ဆေးရုံမှာ မှေးနကေိ့တျပို့ပေးပွီး စိတျခမျြးမွမှေု့ ရှိအောငျ လုပျပေးတာတဲ့ဗြာ မှေးနရှေ့ငျ မဇငျသဈလငျး ရေးတဲ့ စာလေးကို ဖတျကွညျ့ပါဦးဗြာ ဒီနေ့ ကတော့ ကြှနျမ ဘဝမှာ လုံးဝမလေို့မရတဲ့ […]
တရားဝင် လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ အတူတူလိုက်အိပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ တကယ်တော့အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာတွေပါ
တရားဝင် လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့Living together နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေဟာတကယ်တော့ အခမဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေပါ။ သူတို့တွေဟာပိုက်ဆံပေးစရာမလို ပဲအခမဲ့ အလကား ရတဲ့အမျိုးပေါ့။ သူတို့အတွက်လိုတာက ဟန်ဆောင်မှုတွေပါတဲ့ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးတခွန်းပါပဲ။ ဒီဘက်ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပျိုစင်ဘဝကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ မိန်းခလေးတွေ တနေ့တခြား တိုးပွားလာတာကဝမ်းနည်းစရာပါ။ ချစ်တယ်ဆို တဲ့စကားလေးတခွန်း နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့ အပျိုစင်ဘဝကိုကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် […]
” ဒီကနေ့အတွက် မင်္ဂလာအရှိဆုံးသတင်း ”ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို အောင်မြင်စွာ ကုသနိုင်ခဲ့ပြီ
ဒီကနေ့မှာ မင်္ဂလာအရှိဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ဝူဟန်းဗိုင်းရပ်စ်ကို အောင်မြင်စွာ ကုသနိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ (၇၀)နှစ်အရွယ် ကူးစက်လူနာအဖွားအိုတစ်ယောက်ကို ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်တဲ့ဆေးတစ်ခု စမ်းသပ်ခဲ့ရာ (၄၈)နာရီအတွင်းမှာ ဆေးရုံက ဆင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းဒေါက်တာတွေဟာ မကြာသေးမီက သူတို့မှာ ကုထုံးအသစ်တွေ့ရှိထားပြီးပြီလို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ပြင်းထန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတွေအတိုင်းအတွက် သင့်တော်မယ့် ကုထုံးလို့သိရပါတယ်။ […]
“ဒီပြဿနာ သေးသေးလေး မဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံတော်သမ္မတအထိ သိစေချင်တယ်”ဟု ဆိုသည့် မန္တလေးမြို့ ရာဇာစိုး ငွေစုငွေချေး သမဝါယမ ငွေထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်းငံ့မှု
“ဒီပွဿနာ သေးသေးလေး မဟုတျပါဘူး နိုငျငံတျောသမ်မတအထိ သိစခေငျြတယျ”ဟုဆိုမန်တလေးမွို့ ရာဇာစိုး ငှစေုငှခြေေး သမဝါယမ ငှထေုတျပေးခွငျး ဆိုငျးငံ့မှု ဖဖေျောဝါရီ(၃) AlinnMyay(အလငျးမွေ) မန်တလေးမွို့၊ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ရာဇာစိုး ငှစေုငှခြေေး သမဝါယမအသငျးက အသငျးသားမြားအား ငှထေုတျပေးခွငျးကို ခတ်ေတဆိုငျးငံ့ကွောငျး ပနျကွားခကျြကို ဖဖေျောဝါရီလ ၂ရကျနကေ့ ထုတျပွနျထားခဲ့ပါတယျ။ အခုလို […]
လူမှုကွန်ယက်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လာသည့် စစ်ကိုင်းမြို့၊နန်းစုရပ်မှ လူနှစ်ဦး ကျန်းမာရေးမကောင်း
လူမှုကွန်ယက်တွင်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လာသည့်စစ်ကိုင်းမြို့၊နန်းစုရပ်မှ လူနှစ်ဦးကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်ကိစွအား တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်၍ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခဲ့ စစ်ကိုင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ လူမှုကွန်ယက်တွင်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လာသည့်စစ်ကိုင်းမြို့၊နန်းစုရပ်မှ လူနှစ်ဦး ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်ကိစွအားဖေဖော်ဝါရီ၎တွင်တာဝန်ရှိသူများသွားရောက်၍ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၄နံနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းမြို့ကောင်းကြောင်းမကောင်းကြောင်းအားမနာတမ်းပြောမယ် group ၌ Gat Gyi Acc ပိုင်ရှင်မှ […]
” ရထားဥပဒေအရဆိုရင် ထောင် နှစ်(၂၀) ထိ ကျခံထိမှာ မကြောက်ကြဘူး ”
၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ရန်ကုန် က ပြည် ကို ရထားနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်။ကိုယ်တွေက တွဲ ၅ မှာ။ ဝါးနက်ချောင်းဘူတာအလွန်…ဖူးကြီးဘူတာရောက်ခါနီး ၁၀ မိနစ်ကျော်ခန့်အလို(၅)မိုင်လောက်မှာ ရထားကို ခဲနဲ့ထုလို့ ကိုယ့်ရှေ့က ကလေးမလေး မျက်ခုံးကွဲသွားတယ်။ ၅ မိနစ်လောက်နေပြီးမှ သိရ တော့ အချိန်က နောက်ကျလို့ ရထားက တော်တော် […]
” ညဘက် အ၀တ်အစားတွေကို အပြင်မှာ လှန်းမထားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ”
အပြင်မှာ ညဘက် ဘာကြောင့်အဝတ်မလှန်းသင့်တာလဲ အပြင်မှာ ညဘက် အဝတ်မလှန်းသင့်ဘူးဆိုတာ မှန်ပါသလား။ မှန်ပါတယ်။ ညဘက် အိမ်ပြင်ဘက်မှာ အဝတ်လှန်းတာဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ကပ်ငြိစေတဲ့ သဘောဆောင်တဲ့အတွက် မကောင်းပါဘူး။ အဝတ်တင် မကပါဘူး၊ အိပ်ရာခင်းတို့၊ စောင်တို့ ကိုလည်း ညဘက် အပြင်မှာ မလှန်းသင့်ပါဘူး။ ညဘက်မှာ အဝတ်တွေထဲကို […]